Archive du 20190731
Mbola Rajaonah Navoaka avy eo naverina eny Tsiafahy
Ny 13 febroary no nosamborina teny Antsahabe ny mpandraharaha Mbola Rajaonah, izay narahina fampidirana am-ponja vonjimaika tany Tsiafahy taorian’ny fakana am-bavany azy.
Analamahitsy Cité Narodana ilay tamboho niorina teo ambony “Buse”
Miezaka mampanara-dalàna ireo rehetra manao fanorenana hatrany ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA).
Akon’ny lalaon’ny nosy 2019 tany Maurice Ireo medaly isa-taranja azon’ny atleta Malagasy
Efa tafaverina eto an-tanindrazana avokoa ankehitriny ireo atleta Malagasy nandray anjara tany amin’ny lalaon’ny nosy 2019 andiany
Trophée Red Dog Scoot 2019 Hahazo Moto Scooter izay tsara vintana
Hikarakara fifaninanana hazakazaka moto indray, eny SRK Imerintsiatosika amin’ny alahady 4 aogositra izao, ny “Club Red Dog Scoot” tarihan’ny filohany, Andriambololona Harison,
Basket Asief Analamanga 2019 Mitohy hatrany etsy Mahamasina
Mitohy hatrany ary hiditra amin’ny andro faha-6 ankehitriny ny fifaninanana Basikety fiadiana ny ho tompondakan’ny Asief Basket Analamanga taona 2019.
Mahafinaritra vao ny mahasoa…
Mivoy ny politikan’ny fitsitsiana ny fitondram-panjakana Rajoelina, kanefa toa resaka ambony latabatra ihany.
Fampianarana eto Madagasikara Sao dia tokony hanaovana fikaonan-doham-pirenena !
Marary ny tontolon’ny fampianarana eto Madagasikara. Adihevitra tsy mety vita ny resaka vanim-potoan’ny taom-pianarana.
FLM Ambohijatovo Vangaindrano Nampidirina CNaPS avokoa ireo katekista
Hisitraka ny fiahiana ara-tsosialy manomboka izao ireo katekista eo anivon’ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) ao Vangaindrano anatin’ny Synodam-paritany Atsinanana.
Delegen’ny Boriborintany faha-4 “Fanosoram-potaka no natao ahy”
Nisy ny fanomezana ny “permis de construction” matoa nisy ny fanorenana ny tsena ao amin’ny “parking Anosibe” izay miteraka olana sy korontana amin’izao fotoana, hoy ny delegen’ny Boriborintany fahefatra. Nambarany fa nisy olona nilaza, fa anisan’ny nandray vola tamin’ny fanamboarana io tsena io, izy.
KAOMININA IVATO Miara-miasa amin’ny rehetra ny ben’ny tanàna
Miara-miasa amin’ny rehetra ny ben’ny tanànan’Ivato Penjy Randrianarisoa.
Rano tapaka teny Ambohimiandra Vokatry ny fanarenana ny fantson-drano, hoy ny JIRAMA
Tapaka ny famatsian-drano teny Ambohimiandra sy ny manodidina omaly talata nanomboka tamin’ny 03 ora folakandro.
Fitakiana karama Voaroaka ny mpiasa 60 teo amin’ny Alliance Française
Tara ny fandoavan-karama teo anivon’ny Alliance Française Andavamamba raha ny loharanom-baovao vitsivitsy azon’ny mpanao gazety maro omaly. Nitaky izany ireo mpiasa mihoatra ny 60 tamin’ny alalan’ny fanangonan-tsonia.
Halatra anaty taksiben’Atsimondrano Nanjavona ny 500.000 Ar
“Tsy tsapa na hita ny tanan’ny lehilahy iray nangarona ny entana tao anaty sakaosy trotroina ka very ny vola dimy hetsy ariary sy ny zavatra sarobidy maro”,
Fitsaram-bahoaka hafa kely Nampandoalihana ilay lehilahy nitondra vola sandoka
Nampandoalihan’ilay mpivarotra “bar” teo ivelan’ny trano fivarotany ny lehilahy iray, izay nahatrarany vola sandola 20.000 ariary.
Fifampitifirana tany Befandriana Avotra soamantsara ilay zandary voatifitra
Efa niatrika fandidiana ilay zandary naratra tany Befandriana vantany vao tonga teto Antananarivo,